warkii.com » Cadeymo muujinaayo in Donald Trump uusan soo laaban doonin doorashada xigta
Cadeymo muujinaayo in Donald Trump uusan soo laaban doonin doorashada xigta
Jariirada The Independent ayaa soo warineysa in madaxweyne Donald Trump uu lumiyey gacan ku heynta inta ugu badan kiisaska Mareykanka asigoona ku sugan xaalad uu si free ku bixi doono xili ay soo dhawdahay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka taasoo bisha November ee sanadkaan ku beegan.
Qoraalka wargayska ayaa lagu sheegay in dhammaan codbixiyaasha sanadkan ay muujinayaan in dadbadan oo Mareykan ah ay si fudud uga daaleen dhaqan xumada Trump ee la xiriirta hadaladiisa aan ka fiirsiga laheyn iyo kuwa been abuurka ah.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Trumo uusan haatan heysan wax uu ku qanciyo cod bixiyaasha, si uu markale xilka madaxtinimo ugu soo laabto, waxaana u sabab ah arimo ay kamid yihiin qaabkii liitay ee uu maamulkiisa ula tacaalay Viruska Corona, kaasoo sida duufaanta camal ugu fidayo Mareykanka.
Sidoo kale waxaa kamid ah qaabka cunsurinimada leh ee loola dhaqmay dadka madow ee Mareykanka mudadii uu xilka hayay, iyo kiiska ay Sirdoonka Mareykanka hayaan, kaasoo la xiriiro in Ruushka ay lacago siiyeen kooxo Daalibaan ka tirsan si ay u bartilmaameedsadaan una laayaan askarta Mareykanka.
Sidoo kale waxaa jiraan mashaakil sharciga la xiriira oo Trump heysato, xili Maxkamada sare ee Mareykanka dhawaan sheegtay in jagadiisa aysan wax Xasaanad ah siin doonin hadii wax laga weydiinaayo kiisaska canshuurta iyo diiwaanka maaliyadeed ee dagmada Manhattan.
Intaas waxaa sii dheer musharaxa xilka kula tartamaayo ee Joe Biden uu yahay shakhsi maxbuub ah oo gudaha Mareykanka laga jecelyahay, waxayna arimahaas is biirsaday cadeyn u yihiin in Donald Trump rajada uu ka qabo dib usoo laabashadiisa ay aad u liidato.